Sidee Loogu Badalaa Ganacsi Xisaab Shaqsiyeedka Pinterest? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 514
Dad badan ayaa go’aansada beddel koontadaada Pinterest sababo kala duwan awgood taas oo maanta ka dhigaysa mid aad ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay uga mahadcelinayaan xaaladaha noocan ah waxaa suurtagal ah in ay nasasho ama jiho cusub siinayaan fikradahooda suurtogalka ah ee ku saabsan mashaariicda ay maanta hayaan.
In kasta oo ay umuuqato in talaabooyin badan loo baahan yahay si loo gaaro guul ganacsi loona wareego koonto shaqsiyeed, runti ma jiraan wax badan oo la sameeyo si loo buuxiyo suurtagalnimadaas. Waxa kaliya ee maskaxda lagu hayo waa taas madashu waxay sameyn doontaa dib u eegis beddel.
Haddii ay dhacdo sababo kala duwan oo isbeddel ah, waxaa suurtagal ah in jihada shirkaddu is beddeli karto ama xitaa ku sii nagaan karto nasashada si loo helo fursado shaqo oo ka wanaagsan. Shaki la'aan, waa fikrad aad ufiican in shaki lagaliyo oo si dagan loo sugo waxa kudhaca madal.
Sidee looga beddelaa koontada ganacsiga ganacsiga shakhsi ahaaneed ee Pinterest?
Sida kor ku xusan, koontada ganacsigu waxay ku jirtaa in ay dadku isla markiiba heli karaan waxa ay yihiin ka dhex raadi barta. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood bilowga walxaha xayeysiinta waxyaabo badan ayaan shaqeynin waana fikrad fiican inaad naftaada siiso nasasho mudan.
Marka waxaas oo dhan la eego, waxaa suurtagal ah in la bilaabo in wax la beddelo si xaaladda loo sii wanaajiyo xalna looga helo bogga. Waxay noqon doontaa wakhti wax la soo qaado si ay u kala duwanaadaan waxa ku jira oo ay u sii socdaan guusha tirakoobka.
Tallaabooyinka lagu beddelayo koontada ganacsiga illaa shaqsiyeed
Gal koontadaada Pinterest sida maalin caadi ah
Waa inaad aadtaa dhanka midig ee sare si aad u xulato xulashooyinka
Dooro dejimaha ku dhex yaal bogga
U dhaqaaq dhinaca bidix ee kore oo gal marinada koontada
U beddelo koontada meheradda una beddel mid shaqsiyeed
Markaa waa inaad wax ka beddesho magaca koontada oo aad bilowdo wadaagidda waxyaabaha ku jira
Haddii ay dhacdo in koontada la xaqiijiyay, waa suurtagal in la sii wado raaxeysiga faa iidadan. Ka waran haddii lagaa rabo maskaxda ku hay waa taas Pinterest waxay dib u eegis joogto ah ku samayn doontaa waxyaabaha ku jira si aan wax dhibaato ah ugu dhicin khayaanada ama xiritaanka bogga.
Miyaad dib ugu laaban kartaa akoon ganacsi oo ku yaal Pinterest?
In kasta oo loo akhriyey inay tahay macquul aan macquul ahayn, haddii ay suurtogal tahay in lagu noqdo meherad ganacsi kadib markuu isbadal sameeyay. Kaliya waa inaad raacdaa talaabooyinka aan kor ku soo xusnay.
Si kastaba ha noqotee, fikrad wanaagsan in laga fogaado faallooyinka weligeed ah ama su'aalaha iyada oo aan sabab laga helin isticmaalayaasha, waa in lala wadaago qoraal sharaxaad ah. Dhexdeeda waxaa suurtagal ah in caddayn ku saabsan wixii dhacay ay muuqato.
Noocyada noocaas ah mahadsanid, waa suurtagal in wax dhibaato ah kama qabin jabsiga ama luminta hal-abuurka. Marka tan la eego, adeegsadayaashu waxay bilaabi doonaan inay ku kalsoonaadaan wax badan oo ku saabsan ama waxa ay u arkaan inay horumariyaan maalinba maalinta ka horreysa waxyaabaha ay ku arkaan shabakadaha bulshada iyo isgaarsiinta.
1 Sidee looga beddelaa koontada ganacsiga ganacsiga shakhsi ahaaneed ee Pinterest?
1.1 Tallaabooyinka lagu beddelayo koontada ganacsiga illaa shaqsiyeed
2 Miyaad dib ugu laaban kartaa akoon ganacsi oo ku yaal Pinterest?